နေမင်းလို ထွန်းလင်းတောက်ပမယ့် လက်သူကြွယ် လက်ချောင်းအောက် မှာ ဒေါင်လိုက် မျဉ်းတိုကလေး – Na Pann San
Na Pann San W | June 17, 2020 | Astrology | No Comments
လက်သူကြွယ် လက်ချောင်း ပိုင်နယ်မြေ က တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္ဂနွေ ဆိုတာ က သူရဇ္ဇ လို့ ခေါ်တဲ့ နေမင်း ၊နေမင်း ဆို တာ က သည်မြေကမ္ဘာ ၏ တန်ခိုးရှင် (တန်ခိုး ) ဆိုတာ က တရုပ် ဘာသာ စကား အလင်း လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ် ။ အဲ့တော့သည် ဒေါင်လိုက် မျဉ်းတို ကလေး က နေမင်း လို အလင်းပေး တဲ့ တန်ခိုး လမ်း ကလေးပေါ့  Ok
သူ၏ ဤ စတင် ဖြစ်တည်လာ ရာအမြစ် က နှလုံးသားလမ်း လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ချစ်မေတ္တာ လမ်းမထက် မှာ အစပြု လာ တယ် သူက ဘာ ကို ပြနေတာ လဲ ဟုပ်ပြီ …. လက္ခဏာရှင် သူဟာ စိတ်နှလုံးကောင်းရှိသူုဖြစ်မယ် လိမ္မာပါးနပ်သူ ဖြစ်မယ် ယဉ်ကျေးမယ် တတ်သိမယ် လူသား အရည် အသွေးကောင်းများ ရှိသူလဲ ဖြစ်နေမယ်နောက် တခုသူက လူသိများမယ် ချစ်သူခင်သူလဲ ပေါများသူဖြစ်မယ် တသက်တာ ဘဝမှာ ချစ်သူ ခင်သူတွေရဲ့ စောင့်လျောက် ကူ ညီ မှု့ မေတ္တာ ရရှိသူတယောက်ဖြစ်နေမယ် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်း တတ်သူ ဖြစ်နေ မယ် … ။
နောက်အရေးကြီးတာ တခုက သူ့ ဘဝ တသက်တာ မှာ အချစ် အိမ်ထောင်ရေး ကွဲကွာသောက အကြောင်းအမျိုးမျိုျးကြာင့်ကြုံလာခဲ့ရင်တောင် သည်သောကဒါဟာ သူ့ အတွက်တော့ခဏတာယာရီ ပါပဲ တဲ့ကွဲကွာသော ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက် က သူ့ ကိုသံယောဇဉ် မပြတ်နိုင်ဘူ တဲ့ ဝိုး မိုက် သည်လမ်းကလေးက ပို ထင်ရှား အင်အားကောင်းလေကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှု့တွေက ပိုပြီးတော့ ထူးခြားအောင် အကျိုးသက်ရောက် စေ ပါမယ် …. ။
နောက် တခု သည်လို လမ်းကလေး ပါရင် သူက ဘာလုပ်လုပ် အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ထက်မြက် တဲ့ ဗီဇကံ ပါရမီထူး ရှိနေသူဖြစ်မယ်နောက်တမျိုးကတောစိတ်နှလုံးသား ၏ ဓမ္မအလင်းရောင် တောက်ပခြင်းနဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း တိုးတိတ်စွာ ခံစားသိရှိနေတတ်ခြင်း စွမ်းအားတွေ ရှိနေသူဖြစ်မယ် …. ။
စာပေ ဂီတ အနုပညာ ပန်ချီပန်ပု စတဲ့အနုပညာဆိုင်ရာခံစားမှု့ ဖန်တည်းမှု့တွေမှာ ကျစ်လစ် အင်အားကောင်းနေသူ တော်သူ ဖြစ်နေမယ် …. ။
ဒါကတော့ကျန်မာရေး
သူ့ တသက်တာဘဝ မှာနှလုံးသွေး စီးဆင်းခြင်းဆိုင်ရာကျမ္မာရေးကောင်းမွန်အောင် သူက ကူညီနေမယ်ေ နာက်တခု ဒါက သူ့ ရဲ့သက်ကြီးပိုင်းဘဝအိုဇာတာကောင်းမယ် သူတည်ရှိနေတာကနှလုံးသားလမ်းမ အထက်မှာလေ သက်ကြီးပိုင်းကာလအသက် ‘ 50 – ဝန်းကျင်မှအထက် သူပိုင်ကာလ နယ်မြေထဲရောက်ပြီအသက်ကြီးမှ အရာရာပို အဆင်ပြေ လာမယ်ေ ငွကျေး ဥစ္စာဓန ကံကောင်းလာမယ် မိသားစု ချစ်မေတ္တာပြည့်ဝ ငြိမ်းချမ်းသာယာ လာမယ်
ဘုန်းတန်ခိုးတောက်ပ ထင်ရှားအောင်မြင် လာမယ် …. ။
များလှ ပါလား သည်လမ်းကလေးက
သူက တည်နေတာက တကဲ့နေရာ မှာလေတနင်္ဂနွေ နေမင်းသခင်နယ်မြေ မှာတည်နေပုံက ဒေါင်လိုက်မျဉ်း မတ်တတ် တည်နေတာ တနင်္ဂနွေ နေမင်းသခင်နယ်မြေ မှာ စတင်လာတာက နှလုံးသား ချစ်မေတ္တာ လမ်းမထက်( အခြားသော ကံအကူလမ်းတွေကပါ အင်အားကောင်းနေ လို့ ကတော့)
စိတ်ကော င်း ရှိ ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချောတဲ့ချစ်သူရယောက္ခမက အမွေပေး ရပ်ရေးရွာရေးမှာ ထိတ်ဆုံးကသူလာမှ အခန်းအနားဖွင့်မယ် ဆိုတာ မျိုး … တမျိုးလုံးကို သူ တခါပြောတာနဲ့ တောက အကိုဝမ်းကွဲတောင် မမှောင်ခင် အရောက် လာတာ ညီလေး ဆိုတာ မျိုး သည်လို အကျိုးပေးထူးမယ့် သူဖြစ်နေမယ်ဒါ့ ကြောင့်ဘုရားရှင်က ဟောထားတာ ပါ – – –
ကံနုင့်တူသော အင်အားကြီးမားခြင်းသည် မရှိ